Sheekadeena - Camei Ele&Stationery Co., Ltd.
QuanZhou Camei Stationery Co., Ltd waxaa la aasaasay 1996. Laga soo bilaabo aqoon-is-weydaarsi yar oo 20 qof ah, qof walba’Hawlkarnimada iyo dedaalka, waxaanu u samaynay ganacsi dhamaystiran oo ka kooban cilmi-baadhis, soo saarid iyo iibinta alaabta waraaqaha.
Sannadkii 2000, waxaanu u guurnay warshad cusub si aanu u horumarino.
Hadda, Shirkaddayadu waxay leedahay in ka badan 10000 mitir oo laba jibbaaran oo iskeed u dhisan oo wax soo saar leh iyo bakhaar.
In ka badan 200 oo shaqaale ah
Waxaan leenahay waaxdayada iibka caalamiga ah.
Dhowr iibiye xirfadleyaal ah, amaro joogto ah sanadka oo dhan oo leh natiijooyin iib ah oo wanaagsan.
Shirkaddayadu waxay bilawday soo saarista alaabada soo noqnoqda tan iyo 1996, khadadkayaga wax soo saarka ee sarreeya waxay leeyihiin mashiinno badan oo horumarsan iyo hawl-wadeenno khibrad leh.
Waxaan sidoo kale dejinay khadadka wax-soo-saarka tolida oo leh in ka badan 200 oo mashiinnada tolida ee kala duwan ee horumarsan iyo shaqaale xirfad leh.
Waxa kale oo jira khad wax soo saar oo diiradda saaraya alaabooyinka bacaha maqaarka ee ku salaysan xabagta iyo shaqaale xirfad leh oo leh farsamada xabagta countertop-ka.
Waxaan soo bandhignay maaraynta horumarsan ee Toyota ee 2013 si ay wax-soo-saarku u fududaato, u wanajiso hufnaanta, una hubiso tayada wax soo saarka ee ka wanaagsan.
Shirkadeena waxay soo saartaa boorsooyin kala duwan oo waraaqo ah, qaabab gaar ah oo tayo wanaagsan leh.
Alaabadayada waxaa loo dhoofiyaa dalal iyo gobollo badan sida Yurub, USA iyo Japan.
Shirkaddayadu waxay si joogto ah ugu hoggaansantay tayada iyo wakhtiga bixinta in ka badan 20 sano, waxayna ku guulaysatay ammaanta macaamiisha meel kasta.
Safarka shirkadda: Waxaan u diyaarinaa safar kooxeed sanad walba shaqaalaha; Tusaale ahaan: 2016 ChangTai 2 maalmood safar; 2017 FuZhou PingTang 2 maalmood oo safar ah; 2018 NingDe TaiLao Buur 2 maalmood safar;
Hawlaha; Shaqaaluhu rubuc-biloodlaha ah waxay u shaqeeyaan sida fuulitaanka buuraha guga, munaasabada ciyaaraha xagaaga, tartanka laadhuuda dayrta (caadada koonfurta Fujian), iyo xaflad dhamaadka sanadka ah ka hor sanadka cusub ee Shiinaha.
2016, shirkadeena waxay ku casuuntay macaamiil badan oo iskaashato ah inay ka soo qayb galaan xaflada sanadguurada 20-aad waxayna ahayd dhacdo farxad u ah qof walba.
Tababar: Shirkaddeennu waxay samaysay Akademiyada Camei. Waxaan hiigsaneynaa inaan si joogto ah u shaqaaleysiino khabiiro si ay wax u dhigaan una abaabulaan tababar dibadda ah dhammaan shaqaalaha.